सरिता गिरीलाई सांसद पदबाटै हटा’उने तयारी ताली या गाली? पढेर शेयर गर्नुहोस् ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सरिता गिरीलाई सांसद पदबाटै हटा’उने तयारी ताली या गाली? पढेर शेयर गर्नुहोस् !
समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीमाथि कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको अध्यावधिक नक्सा अनुसार निशानछापका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेपछि गिरीले उक्त प्रस्ताव खरेजीको माग गर्दै अर्को सं’शोधन दर्ता गराइकी थि’इन ।
तर, समाजवादीले भने संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गिरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन समाजवादी पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । पार्टीले प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदासमेत गिरीले अस्वीकार गरेकी छन ।
समाजवादी पार्टीसमेत एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । समाजवादीका एक नेताले अन्तिम समयसम्म पनि पार्टी ह्वीप नमाने गिरीलाई सांसद सदस्यबाटै हटाउने गरी सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । अपराह्न १ बजे बोलाइएको संसद बैठक अघि समाजवादीको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।
Previous उद्धार उडान : सरकारले घटायो हवाई भाडा, कहाँको कति?,,,हेर्नुहोस्।
Next सुगौली सन्धि खा’रेज गरौं, ग्रेटर नेपालको नक्सा निकालौं: सांसद गंगा चौधरी